Kedu ihe ndị bụ maka ihu igwe? Gịnị ka ha bụ? | Netwọk Mgbasa Ozi
Monica sanchez | | Ngwaọrụ gbasara ihu igwe
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ihu igwe, ị na-eche n'echiche ịzụta otu n'ime ọtụtụ igwe ihu igwe dị ma ọ bụ Ebe Weather, eziokwu? Enwere ọtụtụ ụdị, mana enwere ụfọdụ zuru oke karịa ndị ọzọ dabere na ọnụahịa ha niile. N'ezie, ndị kachasị ọnụ bụ ndị nwere ike ịlele mgbanwe mgbanwe ihu igwe karịa, yabụ, nke kachasị dabara maka ndị chọrọ ịmata n'ụzọ miri emi ihu igwe dị na mpaghara ha, ebe ndị dị ọnụ ala karịa maka ndị kwekọrọ. na ịmata ọnọdụ okpomọkụ a na-edekọ n'ehihie na ikekwe ịmara iru mmiri ihu igwe.
Dabere na ihe ị ga-eji ya maka, ọ ga-adọrọ mmasị ịmara ụdị ụdị igwe e ji enyocha ihu igwe dị na ya na ọrụ ọ bụla n’ime ha nwere. N'ihi ya, ọ ga-adịrị gị mfe ịhọrọ ụdị kachasị mma maka gị.
1 Temometa, otu n’ime igwe meteorology nke anyị niile nwere
1.1 Temometa Mercury
1.2 Igwe temometa dijitalụ
2 Igwe mmiri ozuzo gbasara ihu igwe
2.1 Ofdị mmiri ozuzo nke ihu igwe
3.1 Hydị hygrometers
Temometa, otu n’ime igwe meteorology nke anyị niile nwere
Ọ bụrụ na anyị ga-ahọrọ otu n'ime igwe ihu igwe dị oke mma, anyị niile ga-ewere temometa. Ọ bụ ngwa a kacha eji rụọ ọrụ n'ihi na ekele anyị nwere ike ịmata ihe okpomọkụ e dere mgbe anyị na-a lee anya na ya. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ ga-abụrịrị na ị ga-ahụ ụfọdụ na-atụle oke okpomọkụ (n'etiti -31'5ºC na 51'5ºC) yana ndị ọzọ na-atụle opekempe (n'etiti -44'5ºC na 40'5ºC), ọ bụ ezie na ihe kachasịkarị bụ na a na-ahụ ha abụọ n'otu ihuenyo ihu igwe.
E nwere ọtụtụ ụdị nke temometa: gas, nguzogide, Clinical… mana a na-eji mercury na dijitalụ na meteorology.
Ọ bụ a iko iko tube na Mercury n'ime. Olu ya na-agbanwe ka ọnọdụ okpomọkụ na-agbanwekwa. Ọ bụ Gabriel Fahrenheit mepụtara ngwa a na 1714.
Igwe temometa dijitalụ
Ihe kachasị ọhụrụ. Ha na-eji ngwaọrụ transducer (dị ka mercury) nke a ga-eji sekit eletriki rụọ ọrụ iji gbanwee obere ọdịiche voltaji enwetara na nọmba. N'ụzọ nke a, ihe ndekọ ederede ga-apụta na ngosipụta.
Igwe mmiri ozuzo gbasara ihu igwe
Ngwa igwe na-atụle oke mmiri dabara na mpaghara ebe etinyere ya. Ihe milimita ọ bụla na-anọchite otu lita, na ụbọchị mgbe mmiri ozuzo anaghị akwụsị ịda, ọ na-atụ aro ka ịlele ya kwa awa 4-6 (dabere na ike ya na ikike nke nlele mmiri ozuzo anyị) ka ndekọ ahụ wee zie ezi. kwere omume.
Ofdị mmiri ozuzo nke ihu igwe
E nwere ụdị abụọ nke mmiri ozuzo nke ihu igwe: akwụkwọ ntuziaka na ngụkọta.
Manual: ha bụ ndị dị ọnụ ala. Ha bu ihe nkpuru osisi nke ejiri plastik mee otutu na agba na a gụsịrị akwụkwọ n'ọtụtụ na tụrụ na millimeters.
Ihe ngụkọta: mmiri mmiri ozuzo nke mmiri ozuzo na-emeziwanye ihe ziri ezi, ebe ọ bụ na ha nwere olulu na onye ọrụ na-edekọ mmiri na-ada ada kwa awa iri na abụọ.
Hygrometer ga-aba oke uru ịmara pasent nke iru mmiri na ikuku ihe dị n'ógbè anyị. Nsonaazụ a gosipụtara n'etiti 0 na 100%. Ọnụ ego a na-anọchite anya pasent nke oke mmiri mmiri na-adị n'ikuku.
A na-ekewa ngwá ọrụ igwe ndị a dị ka ha si dị analog ma ọ bụ dijitalụ.
Analog: ha na-apụta ìhè dị ka nke ziri ezi, ebe ha na-achọpụta mgbanwe iru mmiri na gburugburu ebe obibi ozugbo. Ma mgbe ụfọdụ ị kwesịrị idozi ha, ya mere ha anaghị erekarị ọtụtụ.
digital: digitals bụkwa ihe ziri ezi, ọ bụ ezie na ọ pere mpe. Ha anaghị achọ nlekọta ọ bụla, yana ha dị njikere maka ojiji ozugbo zụrụ.
Barometa bụ nke ahụ na-atụle ịdị arọ nke ikuku dị elu nke ụwa, nke amara aha ikuku ikuku. Onye physics bụ Torricelli mepụtara nke mbụ na 1643 mgbe o mechara nyocha dị mfe:
Ihe mbụ o mere bụ iji ite Mercury mechiri emechi ya mechie otu iko iko, wee gbanye ya na bọket jupụtara na mercury. N'ụzọ na-akpali mmasị, kọlụm nke Mercury dara sentimita ole na ole, na-eguzo na ihe dịka 76cm (760mm) n'ogologo. Nke a mere ka milimita nke Mercury ma ọ bụ mmHg bilitere.
Ma, a ka nwere ihe ọzọ: nrụgide nke ikuku nkịtị na oke osimiri bụ 760mmHg, ya mere ị nwere ike nweta data nrụtụ aka a iji mara ma ihu igwe ga-adị mma ma ọ bụ. Kedu? Dị mfe. Ọ bụrụ na ọ daa ngwa ngwa ị ga-ama na ajọ ifufe ahụ na-eru nso; N'ụzọ dị iche, ọ bụrụ na ọ na-arị nwayọ nwayọ, ịnwere ike idobe nche anwụ na nchekwa maka ụbọchị ole na ole.
Site na ngwa igwe ndị a anyị nwere ike ịma ikuku ikuku. Ndị a na-ejikarị eme ihe bụ ihe a na-akpọ windlass. Ha na-atụ ọsọ na km / h.
Mgbe ifufe 'fekwasịrị' pinwheel ya, ọ tụgharịa. A na-agụ mpempe akwụkwọ ọ na-enye site na tebulu ma ọ bụ dekọọ na mpempe akwụkwọ ma ọ bụrụ na ọ bụ anemograph.
Heliograph bu otu n’ime igwe meteorological na-enye anyị ohere ịlele oge insolation. A ga-agbanwe ya dabere na mbara ala ugwu ya na dịka oge nke afọ ị nọ na ya, ebe ọ bụ na anyanwụ dịgasị n ’elu ka afọ na-aga.
Ihe kacha mara amara bụ Campio-Stokes heliograph, nke nwere iko iko nke na-eme dị ka oghere na-agbanwe. Mgbe ụzarị anyanwụ gafere, a na-ere kaadị na-ere ọkụ 'ọkụ' ma anyị nwere ike ịmata awa nke anwụ na-acha ụbọchị ahụ.
A na-eji nivometer eme ihe tụọ etu snow dara n'oge ọ bụla. E nwere ụdị abụọ: laser, nke a ga-enwerịrị n'ime ala iji debanye aha ya, yana nke acoustic nke, ekele maka onye na-ebugharị ebugharị ultrasonic, ọ dịghị mkpa ka ọ kpọtụrụ ya na snow.
Na mkpokọta, ka ọdụ ụgbọ elu dị oke ọnụ, ọ ga-abụ ihe zuru ezu. Dabere na ojiji ịchọrọ iji ya, ọ nwere ike ọ gaghị adị mkpa imefu nnukwu ego n'ihi na ikekwe ị ga-eji nke dị ọnụ ala karịa dozie. Ma, kama nke ahụ, ọ bụrụ na ị maara na ị ga-achọ ịmatakwu, egbula oge ịga ịzụta otu, nke nwere ike ịnwe ọnụahịa kachasị elu, mana n'ezie ị nwere ike ịnụ ụtọ ya karịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ngwaọrụ gbasara ihu igwe » Ngwa igwe na ọrụ ha
sofia doro anya gonzales dijo
Ihe a na-adabara m nke oma nihi na ulo akwukwo anyi na enye ya. Daalụ
Zaghachi sofia claro gonzales
mari marijuo dijo
M na-emekwa nke ọma. daalụ
Obi di m uto na o baara gi uru, mariangel 🙂.
Enwere m mmasị na ihu igwe.
YOUMARA NKWUKWU AH THAT NA-EJI IRBỌCH D NTIRTA AH THE
Ngwa eji tụọ ntụ ikuku bụ ihu igwe.
gbanwee m ma ọ bụ na ọ bụ ọkụ ọkụ dijo
magburu onwe nkọwa jere ozi m ọtụtụ
Zaghachi ịgbanwe m ma ọ bụ na ọ bụ ọkụ ọkụ
Obi dị m ụtọ na ọ baara gị uru. Ekele 🙂
ezi na ezi ozi m n'anya 😀
n'agbanyeghị na nke ahụ bụ endometer nke ahụ bụ NA-enyere M aka !!!
Obi dị m ụtọ na ọ masịrị gị.
The endometer amaghi m ihe obu, ewela m iwe. Anọ m na-achọ ịntanetị iji hụ ma achọta ihe ma ọ nweghị ihe na-egosi; naanị okwu endometrium, nke na-enweghị ihe ọ bụla gbasara ihu igwe (ọ bụ mucosa na-ekpuchi ebe ebe akpanwa dị).
ok daalụ monica sanchez Enwetakwara m endrometrium ma ọ bụ na ọ ga-abụrịrị na ọ na-agba agba ma ọ bụ ezigbo ekele na ekele 😀
Ekele m gị 🙂
aza burgos dijo
Ndewo, gbaghara m, achọrọ m ịma gbasara anemocinemographer ????
Zaghachi ka isai burgos
Ọ bụ ngwaọrụ na-agwakọta ihu igwe ihu igwe (iji tụọ ntụ ikuku), anemometa (iji tụọ ọsọ ikuku), yana ngalaba etiti na-arụ ọrụ na ndekọ data.
nnọọ, kedu ka ị mere Enwere m ajuju ịjụ. Ọ bụ eziokwu na a na-edozi hygrometers dijitalụ maka ịdị elu na ọkwa mmiri? Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na m nọ mita 500 karịa elu oke osimiri, ịgụ ihe na hygrometer nwere ike inye m ziri ezi?
Daalụ nke ukwuu n'ọdịnihu!
Ndewo Juan Manuel.
Ee, n'ezie: dijitalụ hygrometers na-atụ ikuku ikuku.
hello monica choro ima ihu igwe di mkpa gini ??
Zaghachi José Manuel Carrasco Nalvarte
Ndewo José Manuel.
Meteorology dị mkpa ebe ọ bụ na ọ na-enye anyị ohere ịmata ọdịiche dị na ọnọdụ okpomọkụ, ntụzịaka na ọsọ nke ikuku, ihe dị iche iche gbasara ihu igwe, wdg, na otu ihe a niile siri emetụta usoro okike dị iche iche.
hello ihe bụ igwe ihu igwe dị n’elu ụlọ elu mgbịrịgba ahụ
Zaghachi ka hhjhjhjh
ozi magburu onwe ya, maka ụmụ okorobịa, olee maka ụfọdụ vidiyo, ọ ga-adị mma
Zaghachi na coral
Ahuru m ya n'anya, daalụ nke ukwuu, ezigbo ihe enyere m aka nke ukwuu
Zaghachi Camila damian
Ndewo aha m bụ CARLOS M SITE PERU Achọrọ m ịma ma ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka n'ịrụ ụlọ ọrụ meteorologi maka ebe m bi, m na-achọ ọtụtụ ihe ịmara banyere ihu igwe.
abu m si Peru kwa, kelee m ma m nwere ike inyere gị aka
Ikwesiri igosi na 1 (otu) mm nke mmiri na-ada na-anọchite anya lita mmiri 1 (otu) na mpaghara nke otu square mita (m2)
Zaghachi Victor M Lopez B
Ndewo m taa amụtara m na ụmụ m ihe niile metụtara meteorology ọtụtụ
Daalụ, anyị enweworị ihe ejiri temomita ọ bụla mee
Zaghachi francis alejandra lameda molleda
I meela nke ukwuu na ọ baara m uru nke ukwuu n'ihi na anyị na-ahụ ya n'ụlọ akwụkwọ m
Zaghachi carlos daniel
Ọ na-agara m nke ọma n'ihi na anyị na-enye ya na ụlọ akwụkwọ sekọndrị na anaghị m ebuputa kaadị dijitalụ na IPad nna nna m (nke a) na a na-enye kaadị ndị ahụ echi ka m ghara ile ha anya taa.
Ana m ekele gị nke ukwuu ma na-ekele onye ọ bụla zitere ya.
Osimiri Naịl na-adịwanye ntakịrị amụma